नयाँ २७ थपिए, संक्रमितको संख्या ४०२, नेपालभर पीसीआर/आरडीटीबाट १ लाख ७ हजार २५३ को परिक्षण(video) – Online Annapurna
नयाँ २७ थपिए, संक्रमितको संख्या ४०२, नेपालभर पीसीआर/आरडीटीबाट १ लाख ७ हजार २५३ को परिक्षण(video)
६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १२:१८ May 19, 2020 38 Views
Novel Coronavirus (COVID-19) Media Briefing 2077.02.06
Novel Coronavirus (COVID-19) Media Briefing 2077.02.06#COVID-19
Posted by Ministry of Health and Population-Nepal on Tuesday, May 19, 2020
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालभर आजसम्म १ लाख ७ हजार २५३ जनाको परिक्षण गरिएको बताएको छ । उनिहरुमा पीसीआर परिक्षण गरिएका ३२ हजार ६०४ र आरडीटी परिक्षण गरिएका ७४ हजार ६४९ जना रहेका छन् ।
परिक्षणमा संक्रमण नदेखिएको संख्या ३२ हजार २०२ रहेको छ । देशभर २१ हजार ६२३ जना क्वारेन्टाईनमा रहेका छन् । ४५७ जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने ३७ जना निको भईसकेका छन् ।
आज झापा निवासी ६२ वर्षिय पुरुषको पीसीआर परिक्षण नेगेटिभ देखिएपछि कोशी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । अहिलेसम्म निको भएर गएका ३७ जनाको अस्पताल बसाईलाई हेर्ने हो भने औसतमा सबैको सरदर १९ दिनको बसाई रहेको पाईएको छ ।
नयाँ २७ जनामा कोभिड १९ को संक्रमण पुष्टि
आज विभिन्न जिल्लाका नयाँ २७ जनामा कोभिड १९ को संक्रमण पुष्टि भएपछि कोरोनाभाइरसबाट संक्रमण हुनेको संख्या नेपालमा ४०२ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नयाँ २७ जना संक्रमित १७ देखि ४२ वर्ष उमेर समूहका रहेका बताउनु भयो । उनिहरुमा २४ पुरुष र ३ महिला रहेका छन् ।
झापामा ९ जना, मोरङमा १ जना, सुनसरी १, सर्लाही २, काठमाडौंमा ३, भक्तपुर १, मकवानपुर १, रामेछापमा १, ललितपुरमा १, सिन्धुलीमा १, लमजुङका १, कपिलवस्तुका ४ र नवलपरासिका १ गरि २७ जना नयाँ संक्रमित थपिएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार संक्रमितहरु रहेको स्थानमा कन्ट्याक ट्रेसिङको काम शुरु गरिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमण देखिएका ४०२ जनामा ३४० जना पुरुष रहेका छन् भने महिला ६२ जना रहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएका जिल्लाहरु ३६ पुगेको बताएको छ भने ४१ जिल्ला ग्रीन जोनमै रहेका छन् । सोमवार दैलेखका १ पुरुषमा परिक्षण पोजेटिभ देखिएपछि कर्णाली प्रदेशसहित ७ वटै प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ ।
नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म २ जनाको मृत्यु भएको छ ।